Ngamnye wethu uyazi oku - iibhagi kunye nezibonda phantsi kwamehlo. Isizathu sokubonakala kwazo sinokuba nayiphi na into, kodwa, ngokuqhelekileyo, isiphumo sinye: ukungahambi kakuhle, ukuhlazeka kunye nokunganeliseki ngokubonakala kwazo. Kule mpahla, ewe, unokukrazula, ukuba unika ixesha lokubonakala kwakho yonke imihla.
Iimbangela zeengxowa phantsi kwamehlo.
Isizathu esibalulekileyo kunazo zonke ukubonakala kweengxowa phantsi kwamehlo kukukhathala, ukunyamezela, ukuxinezeleka, ukunyanzeliswa nokungapheli kokulala. Kwakhona, ukubonakala kweengxowa kunye neengqimba phantsi kwamehlo, kunokukhokelela kwiziyobisi, iziyobisi, iiguba. Emva kwakho konke, banciphisa umgangatho wobumanzi kwiishubhu zomzimba. Kwakhona, ukujikeleza ngaphantsi kwamehlo kuvela kwi-TV ebude, okanye kumsebenzi omude kwikhompyutha. Emva koko, ulusu olusondeleyo kwamehlo aluxakekile kwaye lubucayi, ngokulandelanayo, igazi elixhamlayo kwi-capillaries, lingagcwele i-oksijini, kwaye ke ezi zikhwama ezimnyama zivela phantsi kwamehlo. Abo bantu abanesikhumba esikhanyayo, izibonda kunye neengxowa ezikufutshane kwamehlo bangabonakala ebusaneni. Ubumanzi obuncinci kumancuba ekhumba, unciphisa isikhumba ekhangele amehlo kunye nomnyama.
Ngexesha apho umntu eliselilanga, i-pigmentation ibonakala kwesikhumba kwindawo yamehlo. Oku kungenza izibonda phantsi kwamehlo zibe mnyama kakhulu. Imibala yelanga inefuthe elibi kakhulu kwi-krimu oyisebenzisayo. Kufuneka ukhethe ngokucophelela i-makeup oyisebenzisayo. Emva kwakho konke, kwiimeko ezininzi, le mekodi oyisebenzisayo kwi-eyelashes yakho, kodwa kwakhona, izifo ezahlukeneyo zingaba yimbangela.
Iingqimba phantsi kwamehlo ziyakwenzeka ngenxa yeentlungu zokudaya iinqwelo zeeleyili kunye ne-eyelashes.
Ukuze ukwazi ukuqonda - kutheni unayo iikhwama phantsi kwamehlo, kwaye ufanele ukuphathwa njani, kufuneka u tyelele ugqirha uze ubonisane naye. Ugqirha kufuneka amisele imbangela yokubonakala kweebhegi ngaphantsi kwamehlo, mhlawumbi unikele ngenkqubo yokunyanga. Ungayeki unyango.
Ukuze uzame ukurhoxisa izangqa kunye nokuvuvukala phantsi kwamehlo, kufuneka uqaphele ngokunikezelwa kwegazi lomzimba wakho. Ukwenza oku, kufuneka ufumane ukulala ngokwaneleyo, ukuphumla, umzimba wakho udinga umoya ophelileyo, uhambe rhoqo, kwaye kubaluleke kakhulu, kufuneka uchithe amanzi amaninzi. Unokufaka isicelo kwiinkcaso. Ungasebenzisa amanzi apholileyo. Ukuphelisa ekudleni kwakho ukutya okunamandla, amanqatha, atyebile kakhulu, naye, akafanele adle. Unyango olungaphezulu kufuneka luqhutywe kuphela ngokusekwa kwesizathu.
Ukuba iingxowa eziphantsi kwamehlo akho zivela ngenxa yokusetyenziswa kwezondlo zondlovu ezitshatileyo, eziqulethe iicidi, kufuneka uqiniseke ukuba zinike, kwaye ungazisebenzisi kwakhona. Esikhundleni sokuba ukhilimu olunjalo, xa uphuma, sebenzisa ukuloba kwelanga eliqhelekileyo okanye ukhilimu womzimba.
Ukuba izangqa phantsi kwamehlo ungumnini wefa, ngoko kufuneka uqaphele iinkophe kunye nesikhumba ejikeleze amehlo ngokucophelela. Ukuba umntu ovela kwintsapho yakho ejikeleza phantsi kwamehlo ahlala ekhona, ke qalisa ukondla ulusu, kwaye ulunakekele ukususela kumncinane.
Ukufumana imaski, sidinga izitato. Gubha iifatata ezintle (i-2 tablespoons) kwaye udibanise kwisitya se-gauze. Beka phezu kweebhokhwe zakho uze ubambe isigxina seyure. Emva koko ususe imaski, kwaye usebenzise ukhilimu onomsoco kwiinkophe kunye nesikhumba ecaleni kwamehlo. Emva kwemizuzu engama-20, gcoba uboya bekotoni kwisisombululo seeyi uze usule ulusu ngamehlo. Sula ngokucokisekileyo ukuze ungalimazi ulusu.
Thatha iqhekeza leqhwa uze uyifake kwisikhwama seplastiki. Esi sikhwama sifanele sibekwe kwesikhumba ejikeleze amehlo. Ungathatha indawo yeqhwa ngekhwama yeeyi. Kodwa okokuqala kufuneka uhlaziye izitya, uze uzivumele zipholile ngaphantsi.
Imaski elandelayo ilula. Ufanele ujonge iitapile kwaye udibanise neparsley, ekufuneka ihlulwe kakhulu. Konke oku kudibanisa ngokucophelela, okubangela ukuba i-mass mass ishicilelwe kwiisisi kwaye isebenze kwesikhumba ejikeleze amehlo. Gcina i-mask isigqithi seyure, uze ususe ngamanzi afudumele.
Unokwenza uxinzelelo lwamayeza omhlaza. Bathulisa ngokucacileyo isikhumba, kunceda ukuphucula ukujikeleza kwegazi kwiindawo ezinengxaki zesikhumba.
Iindidi ezahlukeneyo zokwenza
I-spaghetti kunye nama-mushroom kwi-sauce enunci
Iimpawu zokuvuswa kwesondo kumadoda
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kwi-stroke
Iifake zezindebe ezisezantsi
Izenzo zokunyanga zomgudu
Indlela yokufundisa abantwana bamawele?
Yintoni eya kuba ngumnyaka we-2018 weenja ze-Aquarius
Ubucwebe beFeng Shui
Isizathu: njani unokuzenza ukhululeke
Ubunzima ngexesha lokukhulelwa kunokuba luyisongelo